SuperSU 2.46 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 2.46 လွန်ခဲ့သော3နှစ်က
Application များ ကိရိယာများ SuperSU
SuperSU ၏ ဖော်ပြချက်
Want to help translate SuperSU ? See http://forum.supersu.com/ !
SuperSU အတွက် စတိုးအသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
SuperSU အပေါ် စတိုး ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
SuperSU အပေါ်တွင် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှု မရှိပါ။ ပထမဆုံး ပြုလုပ်လိုက်ပါ!
rsdamasceno စတိုး 3.9k 2.53M
SuperSU နှင့် အလားတူသော အက်ပ်များကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ
APK အကြောင်း SuperSU အချက်အလက်
APK ဗားရှင်း 2.46
ကိုယျရေးလုံခွုံမှု မူဝါဒ http://www.supersu.com/about#supersu
လကျမှတျ SHA1: 4C:1E:2C:7F:9B:28:8E:CE:E8:1A:19:3F:8F:91:7E:50:76:A0:62:1D
ထုတျလုပျသူ (CN): Chainfire
SuperSU APK ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ